Beesha Caalamka: Doorashadda Farmaajo uu rabo baa dhacaysa | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka: Doorashadda Farmaajo uu rabo baa dhacaysa
Hadalka Saaxiibadda Beesha Caalamka ayaa u muuqda mid jawaab u ah warqaddii Maanta ay Musharixiinta Mucaaradka u direen ee cabashadda hanaanka doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiiladda dalalka ajnabiga u fadhiya Muqdisho ayaa Caawa soo saarey War-Saxaafadeed ay ku taageereen qorshaha Farmaajo inuu dalka ka qabto doorasho aan loo dhameyn.
"Heshiiska 17kii Sebtember wuxuu yahay aasaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021. Ma jiri karo dib-u-furid lagu sameeyo Heshiiska 17-kii Sebtember ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar-socda," ayaa lagu yiri qoraalka.
Saaxiibada Beesha Caalamka waxay sheegeen in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshado aan la aqbali karin, iyagoo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed oo Musharaxiinta si nabad ah ku soo bandhigaan aragtiyadooda.
Hadalkan ayaa ah mid looga digayo Musharixiinta inay kasoo horjeestaan doorashadda uu Farmaajo qabanayo, islamarkaana ay fowdo sameeyaan, waxaana cadaatey inay dowladaha Beesha Caalamka wax dan ah ka lahayn in Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacdo.
Midowga Musharixiinta Mucaaradka ayaa Maanta Warqad ay kaga cabanayeen boobka uu Farmaajo ku hayo hanaanka doorashadda u direen Beesha Caalamka, oo ugu baaqeen inaysan dhaqaale ku bixin hanaan hal qof wato, oo lagu muransan yahay.
Qaar kamid ah qodobada Heshiiskii doorashadda September 17, 2020.
In doorashada Xildhibaannada labada Aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada Muqdisho.
In sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'daha amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah.
0 Comments Topics: beesha caalamka doorashadda 2020 farmaajo soomaaliya